यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु (सूचीसहित) — Arthatantra.com
Arthatantra.com > समाचार > यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु (सूचीसहित)
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु (सूचीसहित)
काठमाडौ । आजदेखि कोरोना महामारीका कारण जारी ‘लकडाउन’ अन्त्य भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकभर चैत ११ गतेबाट लागू भएको लकडाउन आज मध्यरातबाट अन्त्य भएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १ गतेदेखि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाइने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, निजी सवारी–साधनमा लगाउँदै आएको जोर–बिजोर प्रणाली पनि हटाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १५ गतेबाट होटल तथा रेस्टुरेन्टहरु सञ्चालन गर्न पाइने निर्णयसमेत गरेको छ ।
हाल होटलहरु बन्द नै छन् भने रेस्टुरेन्टहरुमा ‘प्याकिङ’ र ‘टेक अवे’ सेवामात्र दिने अनुमति छ । तर, सामूहिक भोज, पार्टीजस्ता गतिविधि गर्न भने पाइने छैन । सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले ट्रेकिङ, ट्राभल र पर्वतारोहणसम्बधी कार्यालय पनि साउन १५ बाट खोल्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।
हिउँदे सिजनको पर्यटन व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयमा हाल भइरहेको दुई ‘सिफ्ट’को व्यवस्था पनि अन्त्य गरिएको छ ।
अब विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन हुने मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।सार्वजनिक यातायात खुलेपछि सरकारी कार्यालय पनि नियमित १० देखि ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
अन्य निर्णय हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
२०७७ साउन ६ गते १९:४८ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं झाडू बोकेर सडकमा निस्कने !
तीन जिल्लामा नेपाल टेलिकमका सबै सेवा अवरुद्ध
दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आजदेखि छुट, खुद्रा पसलदेखि डिमार्टमेन्ट स्टोरसम्म